कलाकार नै यसरि पक्राउ परेपछि ….. « Etajakhabar
कलाकार नै यसरि पक्राउ परेपछि …..
काठमाडौं । (कोभिड–१९) संसारभर महामारीको रुपमा फैलिदै छ । यसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता नलागेकोले पनि यसको त्रास विश्वमा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । विश्वका कुनै भूभागमा जान छेकबाँध नभएका मानव जाति २०२० को सुरूवाति महिनाबाट नै बन्द कोठामा थुनिएर बस्न बाध्य भए । सुरूवाति चरणमा चीनको वुहान प्रान्तका मानिसहरूलाई घरमा नै सिमित गरेको भाइरस त्यसको केही हप्तापछि नै युरोप र अमेरीका फैलिँदै अहिले विश्वका अधिकाँश मुलुकमा पुगिसकेको छ । भाइरस देखिएको सुरूवाती महिना अथवा दिनभन्दा अहिले थप आ’क्रा’मक अनि ख’त’र’नाक समेत देखिएको छ ।
यतिबेला संक्रमणले देशमा हरेक दिन सयौको ज्या’न लिइरहेको छ । भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वभरी एउटा विधि धेरै प्रचलनमा आएको छ । त्यो हो लकडाउन । अत्यावश्यक बाहेकका काम बाहेक सबै कुराहरू प्रायः बन्द छन् । शिक्षा तथा अर्थतन्त्र समेत बन्द रहेका बेला अन्य कुराहरू सञ्चालन हुने त झन् कुरै रहेन । जसको मा’रमा केही कलकार पनि परेका छन् । कसैले जिते, कसैले हारे भने कसैले ल’डिरहेका छन् । फिल्म उद्योग पनि यसको मा’रमा परेको छ । सं’क्रमण बढ्दै जाँदा सुरुमै सिनेमा घर बन्द भए ।
नेपाल तथा भारत लगायतका विश्वका कैयन मुलुकमा लामो समय देखि फिल्म हल बन्द नै छ। विश्वको फिल्म बजारमा हलिउड पछि धेरै कारोवार हुने बलिउड फिल्म उद्योग पनि कहरको चर्को मा’रमा परेको छ। यो विषम मा’रमा भने बलिउडका कलाकारका कमाइले भने चर्चा पाएको भारतीय समाचार माध्यमहरुको दावी रहेको छ। सं’क्रमणका कारण दैनिक हजारौँले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । संक्रमणका कारण आर्थिक संकटले धेरैलाई सताएको छ । बलिउडका केही कलाकारहरु आफुहरुले लामो समयदेखि काम गर्न नपाएको र चरम आर्थिक संकटमा रहेको बताएका थिए ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार लामो समय लकडाउन भएपछि चरम आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन केही अभिनेत्रीहरु नराम्रो काममा संलग्न रहेको बताइएको छ । ठाणे क्राइम ब्रान्च युनिट एकले यौ’नक’र्मीमा संलग्न दुई अभिनेत्रीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुसँगै ब्रोकर पनि पक्राउ परेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
भारतमा बुधबार दिउँसो एक घरमा छापामारीको क्रममा प्रहरीले से’ ‘क्स -या’केटको पर्दाफास गरेको छ । भारतको ठाणे क्राइम ब्रान्च युनिट १ को टीमले अनुसन्धान गर्दा दुई महिला एजेन्ट र एक पुरुष दलालसमेत पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । सोधपुछ गर्दा उनीहरुले लकडाउनका काम नपाएका कारण वे’श्या’वृ’त्ति’को काम सुरु गरेको प्रहरीलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका दुई अभिनेत्रीले लकडाउनका कारण काम नपाएका कारण उनीहरुलाई आर्थिक अभाव भएको र केही सीप नलागेर यो पेशालाई अपनाउन बा’ध्य भएका हुन् । जानकारीमा दिइए अनुसार दुबै अभिनेत्री मुम्बईमा एउटा ठूलो से’ ‘क्स र्‍या’के’ट एजेन्टको सम्पर्कमा थिए । तर वे’श्या’वृ’त्ति’का लागि उनीहरुले ठाणे शहरलाई छाने किनभने त्यहाँ प्रहरीको खासै डर थिएन । तरपनि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । दलालले ग्राहकसँग एक रातको लाखौं रकम असुल गरेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएको छ ।
छा’पामा’रीको क्रममा प्रहरीले दुई अभिनेत्रीसमेत दुई महिला एजेन्ट र एक पुरुष दलालसमेत पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले यसलाई हाई प्रोफाइल से’ ‘क्स र्‍या’के’ट बताएको छ र यसबारे ग’म्भीरता’पूर्वक अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । पक्राउ परेका मानिसहरुसँग सोधपुछ गरिँदैछ र यससँग सम्बन्धित थप मानिसहरुमाझ प्रहरी अब पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ । पक्राउ परेपछि यी दुई अभिनेत्रीले प्रहरीसँगको कुराकानीमा आफूहरुसँग काम नभएका कारण पैसा पनि नभएको र कसैले केही मद्दत पनि नगरेका कारण बा’ध्यतामा यस्तो पेशा गर्नुपरेको बताए ।
भोलि देखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नपाउदै आयो यस्तो दुखद खबर
आज काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको अनौठो दृश्य
१२ बजे राती चिहानमा भूतसँग बियर खाए युवाले, पत्याउनै नसकिने घटना- युवती चिहानबाट उठेपछि.. मध्यरातमा चुडेलसँग बसेको गहिरो प्रेमको भित्री रहस्य (भिडियो सहित)
काठमाडौंमा पसल, सवारीसाधन, होटल देखि ट्याक्सी सम्म चल्न्न पाउने
….त्यसपछि मा’ रेको श्रीमती र छोरालाई अंगालो हाल्दै रातभर सँगै सुतें
विवाह भएको २७ दिनमै अस्ताएकी विष्णुका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, भन्छन् ‘जहिले राती ३ वजेसम्म श्रीमतीको हात समाएर बस्थेँ उनि डराउथिन उनि सुतेपछि मात्र म सुत्थे ‘ (भिडियो)
देबी जस्ती सन्तोषीको मन्दिरकै छेउमा कस्ले गर्यो ह त्या ? के सन्तोषी गर्भवती थिइन् ? घटनास्थलमा प्रत्येक्ष्य हेर्दा देखियो यस्तो प्रमाण , हेर्नुहोस भिडियो
काडमाडौं । दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा शव फेला परेकी सन्तोषी सुब्बाको मृत्यु घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले
सन्तोषी सुब्बाको घटनामा बौद्धबाट पक्राउ परे युवक
काठमाडौ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौं(तराई(मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको पोली
आफुले पठाएका ११ मन्त्री एकैपटक निकालिएपछि के गर्दैछन् महन्त ठाकुर ?
काठमाडौ । जसपाका नेता महन्त ठाकुरका लागि मंगलवार झट्का दिने खालको घटना भयो । सर्वोच्च
एकैपल्ट १० सन्तान जन्माएको भनिएकी दक्षिण अफ्रिकी महिला गर्भवतीसमेत नभएको पुष्टि
बोल्न थालिन् नायिका निशा घिमिरे, स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार ,अस्पतालबाट बाहिरियो यस्तो भिडियो (हेर्नुस भिडियो )
विवाह अघि म गर्भवती भए के गर्नुहुन्छ ? फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यपकी छोरीको यस्तो प्रश्नमा अनुराग कश्यपले दिए यस्तो जवाफ